တိုက်ခန်းနှင့် ကွန်ဒို အခန်းပေါင်း ၁ဝဝဝဝ ခန့် ရောင်းချသွားမည့် (၁ဝ)ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်င - Yangon Media Group
တိုက်ခန်းနှင့် ကွန်ဒိုအခန်းပေါင်း ၁ဝဝဝဝ ခန့်ကို ရောင်းချသွားမည့်(၁ဝ)ကြိမ် မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံး အိမ်ခြံမြေအရောင်းပြပွဲကြီးကို တပ်မတော်ခန်းမတွင် ကျင်းပလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါပြပွဲကို iMyanmar House.com မှကြီးမှူးပြီး ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်မှ ၂၃ ရက်အထိ ရန်ကုန် မြို့ ဦးဝိစာရလမ်းရှိ တပ်မတော်ခန်းမတွင် သုံးရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ပြပွဲအတွင်းကျပ်သိန်း ၂ဝဝ ကျော်မှစသော တိုက်ခန်းများ၊ ကျပ်သိန်း ၅ဝဝ ကျော်မှကျပ် သိန်း ၅ဝဝဝ ကျော်အထိ တန်ဖိုးရှိ ကွန်ဒိုပေါင်းများစွာကိုတစ်နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အထိ အရစ်ကျစနစ်များ၊ ဘဏ်ချေးငွေများ၊ အထူးလျှော့ဈေး နှုန်းများဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ရန်စီစဉ် ဆောင်ရွက်ထားရှိကြောင်းသိရသည်။
iMyanmar House.com ၏ Managing Director ဦး နေမင်းသူက”ဒီအရောင်းပြပွဲမှာ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာကနေ နိုင်ငံ တကာအဆင့်မီ ကွန်ဒိုတွေအထိ အမျိုးအစားစုံလင်စွာလေ့လာဝယ် ယူနိုင်ဖို့ အိမ်ခြံမြေနဲ့ဆောက်လုပ် ရေးကုမ္ပဏီပေါင်း ၅ဝ ကျော်မှပြသ ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရာချေးငွေအတွက် KBZ Bank, AYA Bank, CB Bank နဲ့ YOMA Bank တို့က Official Banking Partner အဖြစ် ပါဝင်ကူညီပေးပါတယ်”ဟု ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်က ကျင်းပသည့် ပြပွဲဖွင့်ပွဲတွင်ပြောသည်။
ယင်းပြပွဲအတွင်း Emerald Bay Project? Golden City? MKT Constructi on အပါအဝင် အိမ်ခြံ မြေနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ ပေါင်း ၅ဝ ကျော်ပါဝင်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး အိမ်ရာချေးငွေများကိုပြပွဲအတွင်းတစ်ထိုင်တည်းလျှောက်ထားနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိမည်ဖြစ်သည်။
မန်ယူနည်းပြရာထူးမှ မော်ရင်ဟို ထုတ်ပယ်ခံရမည်ဟု ဆန်းချက်ဇ်နှင့် ရိုဂျိုတို့ အလောင်းအစား ပြု
လာမည့် ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အိမ်သုံး မီတာဈေးနှုန်းများကို စိစစ်လျှော့ချမည်ဟု လျှပ်စစ် ဒုဝန်ကြီးပြေ